Akụkọ - Laghachi na nke mbụ Edison bọlbụ ịchụso bọlbụ na mma nke dị ọcha
N’afọ 1809, Englisg mepụtara Humphry Davy mepụtara ọkụ latrik mbụ. O jikọtara okporo osisi nke icheku ọkụ, nke bụ ihe mejupụtara carbon, na batrị nwere waya abụọ. Ọ bụ ezie na ọkụ ahụ adịteghị aka, o gosipụtara na ụfọdụ ihe na-ekpo ọkụ nke ukwuu ha na-egbukepụ mgbe ọkụ eletrik na-agafe ha. N’afọ ndị 1870, onye America na-echepụta ihe bụ Thomas Edison nwapụtara bọlb ọkụ eletrik. Versiondị ya bụ iko iko na-emechi ikuku nwere waya nwere eriri, nke a na-akpọ filament, nke ejikọtara na ọkụ eletrik nke a maara dị ka nke ugbu a. Ọ bụrụ na nke ahụ dị ike ugbu a, filament ahụ na-acha ọcha-ekpo ọkụ. Filamenti mbu emeghị ogologo oge, mana na 1879, o mepụtara filament na-adịte aka nke emere site na carbon.
Ọtụtụ n'ime anyị maara akụkọ ahụ dị n'elu, mana anyị maara etu bọlbụ mbụ dị.
Ee, ọ fọrọ nke nta ka nke a.
Anyị ga-ebipụta ọtụtụ ngwaahịa pụrụ iche iji cheta ncheta nke ndị na-emepụta bọlbụ na filament na-agbanwe agbanwe nke dị n'ime nke DC 24V duru ọkwọ ụgbọ ala na-eduzi.
Anyị na-agba ndị mmebe enyi mere nke usoro a ji ezi obi.
N'ebe a, ọ ga-amasị m ịdepụta usoro atụmatụ maka ndị na-emepụta ihe maka ntụle sitere na nlele ụlọ ọrụ.
1.The bọlbụ udi, na bọlbụ nwere ike ịbụ kwa nnukwu ， n'ihi na ọ bụrụ na kwa oke, ibu ibu ga-ukwuu na iko nko ma eleghị anya ike ibu ibu, otú ahụ ka anyị nye ndụmọdụ dayameta nke bulbs bụghị n'elu 200mm, na elu ọ bụghị ihe karịrị 300mm.
2.The mgbanwe filament owuwu, na mgbanwe filament Ọdịdị nwere ike ọ bụla Ọdịdị dị ka ị pụrụ image. Ọ ga-dakọtara nke ọma na iko udi.
3.The agba nke iko, ọ pụrụ ịbụ ọtụtụ iche iche nke agba okokụre, dị ka doro anya, amba anwụrụ, ọla kọpa, dara, egwurugwu acha, ịjụ oyi-acha anụnụ anụnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ odo, maka na agba ị nwere ego na anyị ugbu a na ngwaahịa. dika o kwere mee.
Anyị na-eduga emeputa nke ihe ndozi bulbs, anyị nwere onwe anyị iko ịfụ mmepụta akara. Kacha nkà iko ịfụ nna ukwu.
Anyị nọ n'ogo miri emi nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ, anyị nwere ngalaba injinia eletriki anyị na akụrụngwa eletriki na ụlọ nyocha.
Naanị iji jide n'aka na ngwaahịa niile na-emepe emepe na-agbaso iwu EU na iwu US na iwu ndị ọzọ.
Dị ọcha nke oriọna bụ ihe ọrụ a ga-achụso. Anyị ga-achọ ịnụ olu dị iche iche. N'ezie, anyị bụ naanị ụlọ ọrụ OEM na China, yabụ echiche gị ga-abụ nke gị. Anyị na-enyere aka mee ka ịse gị na ọkụ mara mma maka ngwa dị elu.